Ịnweta Linkys WRT54G Wireless-G Broadband Router
Ezigbo ndị na-ahụ maka ikuku na-enweghị eriri na-abịa na ọtụtụ ndabara ndabara ndị na-enweghị nchebe. A ghaghị iwere nzọụkwụ ụfọdụ iji hụ na netwọk ikuku gị. Na nke a, m ga-akọwa otú ị ga-esi nweta njikọta Linkys WRT54G Wireless-G Broadband. Iji nweta njikọta Linkys WRT54G Wireless-G Broadband router soro usoro ndị edepụtara n'okpuru:
IHE: Ntuzi a dabeere na Linksys WRT54G Wireless-G Broadband router
Mbụ tinye ihe ndị a n'ime adreesị ozi-e nke nchọgharị gị: http: // 192.168.1.1
A ga-akpali gị maka aha njirimara na paswọọdụ, ị ga-etinye ha na ha maka ma ha ga-ezigara gị na saịtị ntọlite.
Na nhazi ihuenyo kachasị> Ntọala taabụ> Ntọala Ntọala:
Chọta ubi "Router Name" ma gbanwee aha ahụ site na ndabara "WRT54G" na-edozi ihe dịkwuo nchebe.
Site na okwuntughe ma ọ bụ ntọala nche na genernal ị kwesịrị iji mgbe ọ dịkarịa ala ihe odide isii na ngwakọta nke ihe odide alphanumeric ukwu na nke ala. Ọ dịkwa mma ịmekọrịta ụfọdụ ederede ihe odide nke nwere mkpụrụ edemede alphanumeric. Ọ dịkwa mma ịghara iji okwu eme ihe ma kama wepụ ụfọdụ akwụkwọ ozi ma ọ bụ dochie ha na mkpụrụ edemede ihe odide dịka nke a ga-esi sụgharịa ọgụ ịkọwa okwu na-abaghị uru.
IE: ududo na-aghọ Sp1D3r (Rịba ama ngwakọta nke mkpụrụ edemede alpha na nke ihe odide tinyere mkpụrụedemede elu na nke ala)
Nhọrọ: Maka nchekwa ọzọ ị nwekwara ike iwepu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Ihe DHCP mere na-ahazi adreesị IP, ụzọ nkwụsịtụ (ụzọ nkwụsị ikpeazụ) na ozi DNS na ụsụụ ndị na-eme arịrịọ DHCP na mpaghara mpaghara mpaghara mgbe ha jikọtara ha. Ọ bụ ezie na nke a na-ebelata njikwa maka onye ọrụ njedebe, ọ na-emekwa ka LAN bụrụ onye na-adịghị ike ozugbo ọ nọ na-emetọ ya dị ka onye na-awakpo ga-enweta adreesị netwọk dị na netwọk mpaghara. Ị nwere ike iwepu ọrụ LAN DHCP site na ịpị bọtịnụ redio "gbanyụọ" na ntanetị ọrụ DHCP. Buru n'uche na ọ bụrụ na i mee nke a, ị ga-eji aka hazie usoro TCP / IP na nkwụnye ọkụ ikuku gị na adreesị ziri ezi, nchịkọta subnet, ndabara ụzọ na DNS ozi. A ghaghị ime nke a ma ọ bụrụ na i nweela ihe ọmụma banyere usoro TCP / IP.
Ozugbo ị gbanwere Router Aha (na DHCP nwere nkwarụ) gụgharịa gaa na ala nke ibe ma pịa "Save Settings", ị ga-ahụzi "Ntọala na-aga nke ọma" okwu. Pịa ebe a.
Na nhazi ihuenyo kachasị> Ikuku taabụ:
Chọta "Aha Ikuku Ntanetị (SSID)" ma gbanwee ọnọdụ ndabara na ihe ọzọ dị nchebe. Ikwesiri itinye okwuntughe na ntinye nchedo site n 'ukwu mbu ebe a. Ọ bụrụ na ịchọrọ ị nwere ike iji otu ọnọdụ ahụ ị jiri maka Router Aha na nzọụkwụ mbụ. Ịchọrọ ị gbanyụọ "Broadcast Wireless SSID" ka ọ bụrụ na onye nrụnye adịghị agbasa usoro a dị mkpa na ụwa. Rịba ama: Site na nkwarụ ọnọdụ a, ị ga-aka ịhazi ndị SSID na ntọala nkwụnye ọkụ gị n'ihi na SSID nke netwọk agaghịzi enwe ike ikpebi site na nhọrọ netwọk ọchụchọ.
Ozugbo ị gbanwere SSID ma nwee nkwarụ na mpịakọta nhọrọ mgbasa ozi SSID na ala nke ibe ma pịa "Zọpụta Ntọala", ị ga-ahụzi "Ntọala na-aga nke ọma" okwu. Pịa ebe a.
Chọta ala nke Nchebe Ikuku na n'elu nke ntinye ntọala ma pịa na iji duru gị na ngalaba nchedo ezoro ezo. Chọta ọnọdụ nchekwa "Nche" wee họrọ WEP. Wee chọta igbe "WEP Nche" wee họrọ akara 128 26 hex nọmba nhọrọ. Pịnye paspọtụ n'etiti mkpụrụ edemede 6 na 8 n'ime igbe ntinye ederede ma pịazie ma bipụta 128 26 hex digits key. Jide n'aka ma cheta paswọọdụ a na ntọala ndị a dịka igodo ga-eme ka ị dakọtara na eriri na ikuku gị. Ị gaghị enwe ike ịfefe okporo ụzọ na netwọk na WEP nyeere ma ọ bụrụ na ntọala na igodo dakọtara na ngwaọrụ niile. Ntuchi zoro ezo WPA bụkwa nhọrọ ma ọ bụghị mgbe nile akwadobere na ngwaọrụ ikuku niile.
Ozugbo i mechara ntọala nhazi WEP, pịa "Save Settings", ị ga-ahụzi "Ntọala na-aga nke ọma" okwu. Pịa ebe a.
Chọta Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe na ntanetịime n'elu ntọala ntọala ma pịa na nke ahụ iji kpọga gị na ngalaba nhazi MAC. Chọta usoro nhazi ihuenyo MAC ma mee ka nke ahụ. Họrọzie "Nkwekọrịta Nanị" nhọrọ nke ga-ekwe ka ngwaọrụ jikọọ na netwọk ikuku mgbe adreesị aha ha (MAC) edepụtara na listi nchịkọta. Nzọụkwụ ọzọ "Nchekwa Ntọala", ị ga-ahụzi "Ntọala na-aga nke ọma" okwu. Pịa ebe a.
Ugbu a, pịa bọtịnụ MAC Filter List nke ga-emeghe windo ọhụrụ na ndepụta nchịkọta Mac nke ị nwere ike idezi. Nke a bụ ebe ị ga-achọ ịbanye adreesị MAC nke ngwaọrụ ọ bụla ikuku ị chọrọ ikwe ka ịnweta WLAN gị.
IHE: Ịchọta MAC (adreesị nkịtị) na Windows igwe mepee mmalite menu ma họrọ ọsọ. Pịnye CMD n'ime ubi ọkụ ma pịa OK. A ga-emepe windo iwu ozugbo. Na windo window a na IPCONFIG / ALL. Chọta "adreesị anụ ahụ" nke ntanetị ikuku. Ị ga-achọ adreesị a ka ị gbakwunye na listi nchịkọta MAC.
Ozugbo ị banyere na adreesị MAC niile ịchọrọ iji nweta WLAN gị na MAC Filter List click on "Save Settings", ị ga-ahụ "Ntọala na-aga nke ọma" okwu. Pịa ebe a.
Ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, na nhazi ihuenyo kachasị> Nchịkọta nchịkọta:
Chọta "Pụrụ Igodo Paswọdu" ma gbanwee paswọọdụ ndabara na ihe ị ga-eji maka nzube ochichi mgbe e mesịrị. Paswọọdụ a na-echebe nchịkọta redirect site na ndị nwere ike ịbanye. Tinye ntinye okwuntughe site na nzo mbu iji mepụta okwuntughe gi. Pịnye na paswọọdụ wee gosi ya. Ugbu a chọpụta na a họrọ HTTPS dịka usoro ntanetị nwere ike ịnweta nakwa na ikuku weebụ na-enweghị ike, njikwa ebe nchekwa na UPnP niile nwere nkwarụ. Ozugbo ị gbanwere okwuntughe wee gbanwee ntọala njikwa pịa "Save Settings", ị ga-ahụzi "Ntọala na-aga nke ọma" okwu.
Obi dị gị ụtọ, ị nwetarala nke ọma Linkys WRT54G Wireless-G Broadband router! Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ọ bụla na-arụ ọrụ site na ntụziaka a, ị kwesịrị ị na-ezo aka na ntuziaka ngwaahịa.